Last updated: May. 15 2019 | 2 min akhri
Sidaas aad dhacday madaxa-badan-Cidhibtiina, waayo, nin a, hadda waxa? Tallaabooyinka hoos ku fudud caawin doona ku dhaco xitaa qoto dheer aad ka.
Tallaabada Simple #1: Had iyo jeer Dhoola caddee
Shidista dhoola dhab ah inta badan ee suurtogalka ka dhigaysa aad eegto hab. Haddii dhoola guulaystay Abaal-marinta ah ee idinkaa this waxaa loogu talagalay in aad nin ama daqiiqad wakhtiga, dhoola kaa caawin doontaa in aad sii faraxsanaan lahayd taas oo iyana ka dhigi doonaa nin doonaya in ay waqti dheeraad ah kula qaataan.
Tip: Marka la samaynayo xiriirka indhaha la jacaylkiinna, si tartiib ah dhoolla caddayn u ogolaanin in ka badan dhan wejigaaga faafin. Marka uu arko, caadi hoos soo fiiriyo. Tani waxay ka dhigi doonaa inaad Adkaadaha.
Tallaabada Simple #2: Tus in aad Best ah
Beddelidda qof kasta, iskaba daa nin waa wadadii musiibada. Waxaan dhamaanteen leenahay sida dabeecadda qofka la yaab leh si sababta aan muujiyo kuwa? Ma aha oo kaliya this ugu faani doonaa Kan aad ku kalsoonaan laakiin waxa ay ka dhigi doonaa in ka badan rafcaanka aad nin.
Tip: Si fudud ku dadaali doonaan in ay eegaan wanaagsan. Ka dhig timahaaga nadiif ah iyo magacaabay, heli caraf saxiixa a, had iyo jeer neefta cusub, lipstick Duugga, iyo in la hubiyo in aad dharka dhawri waa nadiif ah oo loogu talo galay.
Tallaabada Simple #3: Noqo Dahsoon
Si aad u muuqan dahsoon ee kaliga ah, aad rabto in aad aad ka tagto nin yaabban adiga kugu saabsan.
Tip: Haddii uu ku weydiiyo oo ku saabsan sheekadaada, kaliya isaga u sheegi a faahfaahin yar ka dibna ilka oo waxaad ku tidhaahdaan “inta kale waan badbaadin doonaa, waayo, mar kale”. Sidoo kale, sugaan inuu isaga u ahaado waxaad la xiriiri. Marka uu sameeyo, hubino inaysan taasi in ay ka jawaabaan isla markiiba. Ma aha oo kaliya in isaga la fikirka doonaa inaad ku saabsan waqtiga oo dhan, laakiin sidoo kale waxa uu noqon doonaa dhicin in aad qabto wax kale oo ay sameeyaan ka badan dhaliilayn isaga maalinta oo dhan.
Tallaabada Simple #4: Had iyo jeer isaga tag oo raba More
Leaving nin aad raba more had iyo jeer waa fikrad fiican. Haddii aad soo afjaro wada hadalka ka hor waxa uu helo duugowday iyo caajis, markiiba ayuu weeraryahanka u fiirin doonaa marka xigta ee aad laba hadal.
Tip: Haddii uu SMS, email, ama wada hadal fool-ka-fool ah u joojiyaan wada hadalka ka hor aamusnaan dhacdaa. Sidoo kale, hubiyo in aan obsessively xiriiri isaga. Haddii aad naftaada aad u heli karaa, aad ka muuqan doontaa mid aad u riixeya.
Tallaabada Simple #5: xeelad rumowday
Geynta khiyaano, tilmaamo shukaansaday isaga kaa caawin doona in ay helaan kalsoonida xiriirka in laba aad soo koraya.
Tip: Iska qabto intuu eegay ka dhanka qolka, sii luqadda jirka u furan by jirkaaga uga aargudato warbixinta xaggiisa, iyo markuu fursad u kacaya dhibo. Sidoo kale, ogolaan in eegeysaa twirl timahaaga ama qaniini aad dibnaha sida in tusi doonaa in aad soo jiitay isaga u.
Tallaabada Simple #6: Noqo In xaggiisa
Show in aad aragto waxa uu samaynayo iyo bixiyaan si ay u caawiyaan ka hor inta uusan ku weydiiyo. By hayo tilmaam yar, deeqsinimada noqon doonaa in ka badan qiimeeyo.
Tip: Haddii uu ku dhex mashruuca lagu caajiso ama buka, isaga aad daryeesho muujinaya by waqti la tilmaami doonaa in aad tahay taageero iyo ababin.
Tallaabada Simple #7: Noqo Force wanaagsan ee uu Life
Noqo qof wanaagsan oo dhanna hortiisay by doonayaa in uu noqdo wanaagsan iyadoo aan loo eegayn xaaladda ama hadalka. Waa wax badan ka sahlan in lagu dhaco jacayl leh qof wanaagsan oo ay kasoo horjeeddo qof had iyo jeer waa ka cabanaya.
Tip: Iyadoo qaar ka mid ah dhaleeceynta iyo cabanaya waa okay, isku day in aad noloshaada sii wanaagsan si uu wada xusuustaa markii sida diiran oo haydh.
Inkasta oo aanay suurtagal ahayn in “dhigi” qof ay dareemaan si gaar ah, muujinaya aad positivity iyo nooca daryeelka dhiiri doono iyo in kantaroolku dareenka uu jihada saxda ah.
5 Waxyaabaha aad waa inay ka fogaadaan Ka hadalka ku saabsan ku Date A First
10 Qaabab ay u abuuraan A gashto Bodacious Bachelorette!